Turkiga Iyo Qatar Oo Ka Wada Hadlay Xoojinta Xiriirkooda – Goobjoog News
Amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamiim Binu Xamda Aala Thaani ayaa qadka telefoonka kula xiriiray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdoğan isaga oo u soo bandhigay xiriirka adag ee laba geesoodka ah oo ka dhaxeeya labada dal iyo sidii lagu sii xoojin lahaa.
Arrintaani ayaa timid iyada oo lagu wado madaxweynaha Turkiga inuu booqdo todobaadka soo socda wadamada Khaliijka oo ay ka mid yihiin Sacuudiga,Kuwait iyo Qatar, si uu ugu kuur galo dhibaatada wali ka taagan Khaliijka.
Erdogan ayaa horay u diiday sharuudihii dalabka ahaa ee ka soo baxay wadamada go’doomiyay dowladda Qatar.
dowladahaan ayaa waxay ku mar marsiyoonayaan in Dooxa ay maalgaliso kooxaha Islaamiyiinta ah iyo in ay xiriir la leedahay dowladda Iran.
Booqashada Erdogaan uu ku tagayo wadamada Khaliijka ayaa waxaa shaaciyay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, waxa uuna madaxweynaha u jeedkiisu yahay in la xaliyo khilaafka wali ka aloosan wadamada gobolka.
Xildhibaan Madeer oo aas qaran loogu sameeyay Muqdisho
Dxjgnw bimnie generic cialis 2020 coupon for cialis
Zjfdga jthoca Order viagra online cialis cost
Wgiebh dvbzuw cialis price cialis price walmart
Qooyyo gffazk Buy viagra walmart pharmacy
Agnrzz mdwzbg Discount cialis online online canadian pharmacy